Ongororo ye organic fetiraiza raw zvigadzirwa
Nekuda kwehuwandu hwakawanda hwemakemikari manyowa ari kuiswa munguva yakati rebei, iyo organic chinhu zvirimo muvhu zvinoderedza pasina neutralization ye organic fetiraiza.
Chinangwa chikuru che organic fetiraiza chirongwat kuburitsa fetereza inoshandisa michina yakasiyana siyana ine zvinhu zve organic uye nitrogen, phosphorus uye potasium mukukura kwezvirimwa. Usati watanga chirimwa chinogadzirwa nefotereza, unofanirwa kuferefeta yemusika wezvinhu zvakasvibirira zvemuno. Kuita ongororo yeruzivo runodiwa pakuvaka fekitori, semuenzaniso, mhando yezvigadzirwa, nzira yekuwana uye yekufambisa uye mutengo wekutumira.
Chinhu chakakosha kuita kuzadzikiswa kwekugadzirwa kwe organic fetiraiza ndeyekuona kuenderera kuchipiwa kwe organic organic zvigadzirwa. Nekuda kwehunhu hwehoriyamu hombe uye kuoma kwekufambisa kwezvinhu zvakasvibirira, zvaive zvirinani kumisikidza yako organic fotereza fekitori munzvimbo dzine huwandu hwakakwana hwezvinhu zvekugadzirwa, senge padhuze nepurazi hombe yenguruve, huku yehuku.
In kugadzirwa kwe organic fetiraiza maitiro, pane zvakawanda zvakajairika zvigadzirwa zve organic, Mugadziri anowanzo sarudza yakanyanya kuwanda zvinhu seyakanyanya mbishi zvinhu uye anoshandisa zvimwe zvakasikwa mbishi zvigadzirwa kana zvine mwero NPK zvinhu sezvimwe zvinowedzerwa, semuenzaniso, organic organic fetiraiza fekitori yakavambwa padyo nepurazi, uye kune marara mazhinji ekurima gore rega. Iyo gadzira inoda kusarudza zvirimwa mashanga seyakanyanya kugadzirwa zvinhu, uye mhuka mupfudze, peat uye zeolite semidziyo.
Muchidimbu, zvigadzirwa zve organic, zvine organic chinhu uye zvinovaka muviri izvo zvinodikanwa kusimudzira kukura kwezvirimwa, zvinogona kushandiswa senge mbishi zvigadzirwa mu organic fetiraiza kugadzira maitiro. Kugadzira tekinoroji inogona kugadzirwa zvinoenderana zvakasiyana mbishi zvigadzirwa.
Sarudzo yeOganic Fertilizer Fekitori
Iko kusarudzwa kwenzvimbo yemuchina wefetireza manyowa kune hukama zvakanyanya kune ramangwana rekugadzira mitengo uye hukama hwekugadzira manejimendi. Iwe unofanirwa kunyanya kufunga zvinotevera zvinhu.
1. Organic fetiraiza chirimwa hachigone kuva kure zvakanyanya kubva kupurazi. Manyowa ehuku uye mupfudze wenguruve anoonekwa nevhoriyamu hombe, huwandu hwemvura uye kusagadzikana kwekufambisa. Kana iri kure kwazvo nepurazi, mutengo wekufambisa wezvinhu zvakagadzirwa unowedzera.
2. Iyo nzvimbo kubva kupurazi haigone kuve yakanyanyisa padyo uye haina kukodzera padanho rekumusoro kusimudzira mune zvimiro zvepurazi. Zvikasadaro, inogona kuburitsa zvirwere zvinotapukira, kunyange kukonzera denda kudzivirira kunorima.
3. Inofanira kugara kure nenzvimbo yekugara kana nzvimbo yebasa. Mukuita kana kugadzirwa kwefetiraiza yemukati, inozogadzira mamwe magasi akashata. Naizvozvo, zvingave zvirinani kuramba kure nekukanganisa hupenyu hwevanhu.
4. Inofanirwa kuve iri munzvimbo dzakapetana nharaunda, yakaoma geology, yakadzika mvura tafura uye yakanakisa kufefetedza. Uye zvakare, inofanirwa kudzivirira nzvimbo dzinowirirwa nemasiraidhi, mafashama kana kupunzika.
5. Iyo saiti inofanirwa kuchinjirwa kune mamiriro emuno uye kuchengetedza ivhu. Shandisa zvizere ivhu risina basa kana renje uye haigare kumunda wekurima. Shandisa iyo yekutanga isina kushandiswa nzvimbo zvakanyanya sezvinobvira, uye ipapo unogona kudzikisa mari.
6. Iyo organic fotereza chirimwa inonyanya kuita rectangular. Fekitori nzvimbo inofanirwa kunge ingangoita zviuru gumi kusvika zviuru gumi nezvisere.
7. Iyo saiti haigone kuve kure zvakanyanya kubva kumagetsi tambo kuitira kudzikisira kushandiswa kwesimba uye kudyara mugadziriro yemagetsi. Inofanira kunge iri pedyo nekuwaniswa kwemvura kuti isangane nezvinodiwa nemvura zvekugadzira uye zvekurarama.